Hoggaanka Baraha | maktabadda | Af-Soomaaliga
Category Archives: Hoggaanka Baraha
05/06/2014 Hoggaanka BarahaWasaaradda Waxbarashada iyo Barbaarintamaamule
JAMHUURIYADDA DIMOQRAADIGA SOOMAALIYA
Xarunta Maamulka Waxbarashada Dadka Waaweyn
1 – Habka Waxbarista
Sida badan dadka waaweyn waxaa wax akhriska iyo wax qorista lagu baraa habka lagu magacaabo HABKA XARFAHA. Sidaas awgeed, aradaydu sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo qoro baranaysa waxay waxbarashadooda ku billaabaan xarfaha oo ay hal hal u bartaan; iyagoo isdaba-joogga Xarfaha raacaya.
Ardaydu marka hore shaqallada bay bartaan oo ay layli ku sameeyaan, kaddibna Shibbanaasha ama isweydaarka labada tillaabo. Ugu dambaystana Shaqalladii iyo Shibbanaashii ay barteen bay ardaydu isu keenaan oo ay codad ama weero fudfudud ka sameeyaan.
b t j x y
bar bir bal caad caano
jar jiir tiir taar moos
Waxtarka uu habkanu leeyahay waa isagoo bare kastaaba si hawl yari ah ugu dhaqmi karo; kol ay ku adag tahay qaarka aan habka waxbarista xirfad fiican u lahayn.
Hase yeeshee, waxaa jira dhawr waxyeelood oo halis ah oo uu habkanu leeyahay ama ku dhaqankiisa la xiriira:
– Xiisa ay ardaydu waxbarashada u leedahay durbadiiba wuu yaraadaa; sababtuna waxay tahay iyadoo intii mudda ah summado aan micna lahayn, sida xarfaha oo kale, lagu mashquuliyo.
– Hawsha u weyn ee inta uu casharku socdo la qabtaayi waa bawsi, ama ardayda oo wax allaale wixii baraha afkiisa ka soo baxa dusha ka xafida. Taasu xiriirka iyo wax wada qabsiga fasalka iyo baraha bay turunturro ku noqotaa oo ay is hor taagtaa. Ugu dambaystana, dhibaatada halkaa ka soo unkata waxay isugu soo biyo shubataa iyadoo aysan ardaydu waxay dusha ka soo barteen mooyiyi aysan karti ay waxyaabo yaryar ku akhriyaan ama ku qoraan lahayn.
– Inta aysan ardaydu dhab ahaan u garan inay ereyadu wax sidooda u jira oo micna leh yihiin, dhibaatooyin bay isu keentooda kala kulmi, markay akhrinayaan iyo markay qorayaan labadaba.
Waxbarashadu waa qofka dabeecaddiisa ama noloshiisa oo beddel lagu sameeyo iyo iyadoo wuxuusan horey u aqoon la baro. Sideedabana waxaynu wax ku baranaa:-
– Maqalka (innagoo maqalna oo dhagta wax la inooga sheego)
– Aragga (innagoo indhaheennaa kaga dharagna wixii cusub)
– Samayn (innaggoo waxaynu baranayno gacanta ka qabta)
Sidaas awgeed, qofka wax akhriska iyo qorista yaqaanaayi, waa inuu leeyahay awood uu:-
– Ereyo micna leh ku akhriyo kuna qoro.
– Ereyadan isugu geeyo oo weero micna leh ka sameeyo.
– Weerahana isugu geeyo oo uu sheekooyin gaagaaban iyo waxyaabaha kale ee baahidiisa, jeceelkiisa iyo waxyaabaha uu ka helo la xiriira ka sameeyo.
– Xarfaha ay fartu ka kooban tahay wada qaatay oo uu yaqaan, si uu ereyo micna leh uga soo saaro.
Taasu waxay inoo oggolaanaysaa inaynu Habka Xarfaha ka kaaftoonno, oo aynu xarfaheenna is barno innagoo ereyo ay ardaydu jecel yihiin oo ay yaqaaniin kaalmaysanaya. Sida muuqatana waajib innaguma aha inaynu xarfuhu siday isu daba joogaan u baranno.
Inta aad habka ereyada ku dhaqmaysid, waa inaad tixgelisaa ood ka foojignaataan qodobbadan hoos ku qoran:-
1- Isla markiiba Looxa-boodda ereyo ha uga buuxin. Marka hore intii mudda ah ardayda la sheekayso, si aydun isu barataan.
2- Kaddibna ereyga buugga ugu horreeya looxa ugu dhig (qor). Barayaasha uusan habka ereygu ku cusbayni, ereyo bay iskood u heli karaan ama ereyo ay ardaydu u sheegeen bay ku dhaqmi karaan.
Tusaalo:- d u g s i g a
Ereyga si digtooni ah ugu dhawaaq; ardayduna ha kaa daba qaaddo; ereyga aad marba ku dhaqmaysidna ul dheer ama mastarad ku tilmaan.
3- Markay ardaydu ereyga akhriyaan, ha ku degdegin inaad qoraalkiisa billawdid, ee marka hore tus qaabka qalinka iyo buugga loogu dhaqmo. Haddiise ay dhacdo inay ardaydu ku dhaqanka qalinka iyo buugga yaqaaniin, isla markiiba tillaabada xigta baad u gudbi kartaa. Ka digtoonow inaadan waqtiga kaga lumin waxyaabahay horey u yaqaanayn.
Waxaa fiican inaad ereyga “dugsiga” sawir ugu lamaanaysid, si ay ardayda suuragal ugu noqoto inay ereyga akhriyaan iyagoo ereyga iyo sawirka isla xiriirinaya.
4- Markay ardaydu yeeshaan awood ay areyga ku akhriyaan, wixii qalab ah ee ay haystaanna (buugga, qalinka iwm) si quman ugu dhaqmi karaan, ereyga looxa si tifaftiran ugu higaadi
d u g s i g a
Xarfaha oo dhan ku dhawaaq, qoraalka ereygaas xarafka ugu fudud sida “i” baad ka billaabi kartaa. Haddaad doontid, “d” baad ka billaabi kartaa, hase-yeeshee waajib kuguma aha oo uma aad baahnid.
5- Marka hore habka qoraalka looxa-boodda ku muuji. Xariiqimaha ay ardaydu buugaggooda ku arkaan oo kalena looxa ku samee. (Taasu waxay ardayda ka gargaaraysaa inay ujeeddada xariiqimaha laga leeyahay si dhab ah u gartaan.
Kaddib markaad xariiqimaha samaysid, xarfaha si tartiib ah oo quman u qor. Dabadeetana ardayda ku dhex wareeg si aad kuwooda liita gacan u siisid. Haddaad la kulantid arday si qaab daran wax u qoraya
oo aysan gacaritiisu fadhiyin, tus sida habboon ee qalinka iyo buugga loogu dhaqmo, kana codso inuu gacantiisa layli tababar ah ku sameeyo.
6- Markaad ogaatid inay ardaydu si fiican xarfaha u qori karaan, ka codso inay xarfaha ay yaqaaniin ereyo cusub ka sameeyaan. Ereyada cusub ha qoraan hana akhriyaan iyagoo ereygii hore ee dugsi ahaa ku beddelaya.
7- Ereyada cusub sidaa ku wad, iyada oo ay ardaydu xarfihii ay horey u yaqaaniin marba erey ka dhisaya. Haddaad casharkii hore si digtoonaan ah u raacday, tillaabada labaad waad fududayn kartaa.
“DEGDEGSIINYAHA WAXBARISTU WAXAY HAD IYO GOOR KU XIDHAN TAHAY GUUSHA UU MARBA FASALKU GAADHO”
Gabagabada waxbarashadanna, waa inaad hubisaa inay ardaydu xarfaha ay fartu ka kooban tahay si quman u wada garteen; ereyo kala geddisan iyo weero gaagaabanna akhriyi karaan oo misana qori karaan. Waxaa iyana loo baahan yahay inaad layliyaal ku filan siisid, adigoo buug, wargeys, ama waxyaabe kale la kaalmaysanaya. Haddii uu waqtigu kugu filan yahayna weero gaagaaban u yeeri.
dugsiga – tillaabada 1aad: Ereyga looxa ku qor, ardayduna ha akhriyaan.
dugsiga – tillaabada 2aad: Ardayda ayaa xarfaha akhrin oo qori, si digtoonaan ahna layli ugu samayn.
Dugsiga – tillaabada 3aad: Ereyga “dugsiga” ayay ardaydu beddeli oo ereyo cusub oo isla xarfahay barteen ka kooban bay dhisi.
DHAWR SHARCI OO HABEYNTA FASALKA KU SAABSAN
Soo saaridda iyo ku dhaqanka Qalabka wax la isku baro:
Ka hor intaadan casharka guda gelin, waxaa lagama maarmaan u ah oo guul lagaga gaaraa Waxbarashada Dadka Waaweyn, qodobbadan soo socda oo fiiro gaar ahaanayd loo yeesho.
1- inaad had iyo goor hubsatid inay ardaydu si habboon u fadhido. Ardayda oo idili waa inay leeyihiin awood ay lugahooda iyo gacmahoodaba siday rabaan ugu fidsadaan; labaderaadle, inay dhib yaraan looxa ku fiirin karaan iyagoon fadhigooda xumaynin.
2- inaad hubisid inuu fasalka oo idili nal ku filan leeyahay.
3- inaad fiilo gaar ahaanayd u yeelatid ardayda aragga iyo maqalka xun, adigoo mar walba tixgelinaya da’da, aragga iyo maqalka ardayda waayeelka ah, ayaa waxaa habboon inaad marka hore fasalkaaga kala shaandhaysatid, si aad u ogaatid kartida uu midkastaaba ka leeyahay aragtida fog iyo maqalka. Waxa badanaaba fiican inaad ardayda aragga iyo maqalka xun safafka hore fadhiisisid.
4- Ka hor intaadan casharka guda gelin, hubso inay kuu dhan yihiin qalabkaad wax ku dhigi lahayd (boodda, qalabka wax la isku baro iwm). Wixii kale ee ay ardaydu u baahan yihiinna sidoo kale uga digtoonow.
Taasu waxay dawo u tahay inuusan marnaba socdaalka isdabajoogga ah ee casharku kala go’in.
5- Casharka kaddib, hubso in fasalka iyo looxaba si wanaagsan loo nadiifiyo.
QALABKA WAX LA ISKU BARO IYO KAALINTA UU WAXBARASHADA KAGA JIRO
Waa maxay Qalabka wax la isku baro?
Qalabka wax la isku baro waa Hubka kala geddisan ee uu baraha wanaagsani ardaydiisa si cad oo muuqata, maskaxdoodana ku waarta wax ugu baro. Baraha wanaagsan ee firfircooni wuxuu awood u leeyahay oo suuragal u ah inuu cashar allaale casharkii uu dhigayo (xisaab, af, saynis, taariikh, iwm) u heli karo qalab waxbaristiisa u dhib yareeya.
Baraha doonaya inuu si qaab leh Qalabka wax la isku baro ugu dhaqmo, waxaa ku habboon inuu qodobbadan ka digtoonaado:-
– Dhuuxo kartida ay ardaydu garashada sawirrada iwm u leeyihiin.
– Qalabka aad wax ku baraysid ha ahaado midaad soo xulatay, ujeeddadaana dhib yaraan kuu gaarsiin kara.
– Qalabku ha ahaado mid ay samayntiisu fududdahay, si ay ardayduna hadday doonaan u sameysan karaan.
Qalabka wax la isku baro guud ahaan laba qaybood buu u kala qeexan yahay. Labadaas oo ah:-
1- Qalabka taagan (non-projected-aids) ee aan mashiinnada u baahnayn; iyo
2- Qalabka socda (projected-aids) ee mashiinnada u baahan.
Qalabka taagan Qalabka socda
Looxa – bustaha Slides
Sawirrada Mullaaxada (Cajalad)
Tabeellayaal (Boodhadh) Telefiishinka iwm
Qalabka wax la isku baro ee taagan (non-projected aids) intooda badan baraha kali ahaantii samaysan kara; ama ardaydiisa buu wadajir ula samaysan karaa. Hase-yeeshee, waxbarista oo guul laga gaaraayi waxay ku xidhan tahay “ISXILQAAMKA BARAHA” – sida uu casharkiisa u soo diyaariyo, habka uu damacsan yahay inuu casharka isaga ah ardaydiisa u baro, iyo qalabka uu marba ku dhaqmayo.
Looxa-booddu wuxuu ka tirsan yahay qalabka wax la isku baro ee taagan waana wax weligii soo taxnaa oo dugsiyadeenna lagaga dhaqmo. Inkasta oo ay looxyada dugsiyadeennu madow u badan yihiin, haddana waxaa la ogaaday inuu cagaarka-madoobi ka wanaagsan yahay madowga kaligiis.
XIRIIRKA LOOXA-BOODDA IYO FASALKA:-
– Looxa boodda waxaad dhigtaa meel sinan oo iftiin ku filan leh, ardaydana ay ka wada arki karaan,
– Casharkaaga looxa oo si wanaagsan loo tirtiray ku qor (waa inaysan marna casharkii hore wax ka soo hadhay casharkaaga cusub kaa dhex gelin). Haddii ay taasu dhacdo, ardayda bay jaha wareer ku ridi.
– Looxa sida buugga wax lagu qoro oo kale ugu dhaqan. Dhinaca sare ee bidixda ka billow wax qorista adigoo si jiifta ah wax u qoraya. Sadarrada si habboon isugu hoos qor, adigoo sadarrada looxa ku samaysan si habsan kor iyo hoos u buuxinaya.
– Looxu waa inuu qayb casharkaaga ka mid ah noqdaa. Ardaydu waa inay fartaada wada akhriyi karaan. Marka hore waxaa fiican inaad xariiqimaha buugga ku yaal oo kale looxa ugu samaysid, si ay ardaydu kuu raacdo, una gartaan faa’iidada ay xariiqimuhu leeyihiin. Ul toosan ama mastarad baad xariiqimaha ku samaysan kartaa.
– Marka aad wax qortid, ha isku gudbin oo looxa ha la sheekaysan ee barbar ugu istaag oo fasalka u soo jeedso.
Looxa-bustahu wuxuu ka tirsan yahay qalabka cusub ee wax la isku baro ee taagan. Guud ahaan hawsha looxan lagu qabto waxay u dhawdahay midda looxa-boodda; hase-yeeshe, waxay ku kala geddisan yihiin in ku dhaqanka looxa-bustahu u baahan yahay hawl casharka hortiisa uu baruhu soo qabto. Waxaa loo baahan yahay inuu baruhu ka hor inta uusan fasalka iman si habsan isugu soo dubbarido casharka uu rabo inuu maalintaa dhigo; iyo iyadoo la isku raacay inuu looxanu dadka waaweyn ee billowga ah waxbaristooda uga fiican yahay looxa-boodda. Taas waxaa looga jeedaa “looxanu wuxuu baraha siin karaa awood uu si qayaxan isdabajoogga casharkiisa ugu muujiyo.
Looxa wuxuu ka samaysan yahay maro ama good duf leh iyo wax adag (loox) oo xagga dambe lagaga tiirsho. Waxaa fiican inay maradu ahaato wax jilicsan oo duf leh ama suuf dhegdheg leh.
Haddii ay dantu kugu kalliftana, busta duug ah baad ka samayn kartaa. Warqadaha la socdana si ay looxa ugu dhagaan, waxaa fiican oo loo baahan yahay inaad iyaga xagga dambe wax duf leh kaga dhajisid.
Looxa marba intii la doono baa lala ekeysiin karaa, waxaase fiican inuu laydi (rectangle) dhererkiisu 1 mitir iyo 20 ilaa 1 iyo 40 yahay ahaado. Haddii ay dantu kugu kalliftana looxa-boodda ama darbiga baad markaad ku dhaqmaysid ku mismaari kartaa, si loo duuduubo kaddib marka ay hawshu dhammaato.
HABKA DIYAARINTA XARFAHA, LAMBARRADA, SAWIRRADA IWM EE LOOXA-BOODDA
– Marka hore soo aruurso waxaad u baahan tahay.
– Sida aad u rabtid u jarjaro, adigoo tixgelinaya aragga, firfircoonaanta iyo kartida ardayda.
– Kaddib markaad jarjaratid, dhinaca dambe wax duf leh (sand-paper) kaga dheji, si ay looxa ugu dhagaan.
– Waxaa iyana lagama maarmaan ah inaad leedahay ugu yaraan laba sanduuq ood xarfaha, lambarrada, iwm ku kaysatid si ay suuragal kuugu noqoto inaad qalab diyaar kuu ah u haysatid iyo inaad casharrada dambe ugu dhaqantid.
Ardayda ay waxbarashadu ku cusub tahay, waxay badanaaba jecelyihiin inay macnaha ereyga ama wixii kale ee ku cusub gartaan; sidaas awgeed, waxaad caadaysataa inaad had iyo goor ereygii ku cusubba sawir ugu lamaanaysid.
– Taasi garashada ereyga bay gacan weyn u gaysan kartaa.
Sawirka wanaagsani ardayda uu wax akhrisku ku cusub yahay buu garashada macnaha ereyga ka kaalmeeyaa.
Sawirka wanaagsani waa midka si fudud ulajeeddadiisa loo garto.
Sawirka wanaagsani waa midka hal ama laba waxyaalood oo si bayaan ah u muuqata ku tusa.
Flash-cards: Qalabkanu wuxuu isna ka tirsan yahay qalabka taagan ee wax la isku baro; wuxuuna ka kooban yahay warqad adag oo ay wax ku qoran yihiin iyo gal ama bushqad la dhex geliyo. Ujeeddada qalabkan laga leeyahay waa:-
– inaad ardayda dhexdeeda xamaasad ku beertid. Taas waxa looga jeedaa, fasalkaad erey, ama xisaab, iwm ay hadda ka hor la soo barey dhex dhigi, adigoo ereyga badhkii ama xisaabta qaarkeed galka ku dahaadhaya.
– Faaiidooyinka kale ee uu qalabkanu leeyahay waxaa ka mid ah isagoo suuragal kaaga dhigaya inaad hubsatid oo aad dhab ahaan u garatid inay ardaydu casharkii tagey si habsan u garteen iyo inay waxyaabo ay weli mugdi kaga jiro oo u baahan in mar labaad loogu soo celiyo.
Awoodda ardayda ee akhriska iyo garashada summadaha kala geddisan ee ay fartu ka kooban tahayna aad buu ardayda uga gargaaraa.
– Wax akhriska degdegga ahna waa lagu bartaa.
1.War-isgaarsiintas:- Tabeellayaasha noocaas oo kale ah waxaa loogu dhaqmaa oo kaliya in wixii war cusub ah xubnaha fasalka ama bulshada loogu faafiyo.
dad la isugu yeerayo inay arrin ama qodob khaas u ah ka wada xaajoodaan; ama waxyaabaha ay aflaamtu ka mid tahay oo la is ogeysiiyo.
Tabeellayaashaas oo kale waxaa fiican in loo qoro hab aragtida u horreysa oo qudha lagu wada arko, ujeeddadiisana lagu fahmo. Sidaas awgeed, waa inay yihiin qaar si habsan loogu fara yaraystay oo ku soo jiita.
2.Waxbarasho:- Ujeeddada weyn ee tabeellayaashan laga leeyahay waa inay qofka akhrisanaya ku beeraan xamaasad uu arrin khaas ah war faahfaahis oo isaga ku saabsan ugu sii raadsado. Goobta laga heli karo warkan cusub ee xiisa lehna waa in tabeellaha si quman loogu muujiyo ama in qofka akhrisanaya war xiisa u leh loogu tabiyo.
Labada goorba, waxa lagama maarmaan ah in tabeellayaasha loo qoro hab ama xirfad ujeeddadiisa isla markiiba loo garto.
– Wuu kooban yahay oo fudud yahay.
– Fikrad qudha buu wataa ama muujiyaa.
– Meel si quman looga wada arki karo baa la sudhaa ama la taagaa
– Sharax cad oo kusoo jiita buu leeyahay.
– Midabbo kala geddisan buu leeyahay si uu qodobbada danta laga leeyahay ku muujiyo.
– Xarfo waaweyn buu ku tusaa, markuu midab qudha ku qoran yahay.
Si aad awoodda akhriska ee ardaydaada horey ugu dhigtid, waxaa fiican inaad wargeyska waxbaristooda ku dartid marka u horreysa ee aad is tidhaahdid weero gaagaaban bay akhriyi karaan. Waxaad ku dhaqmi kartaa wargeyska maalin walba soo baxa, adigoo marka hore arday ka codsanaya inuu qodob gaaban oo xiiso leh fasalka oo dhan kor ugu akhriyo. Kaddibna, dhawr arday baad ka codsan kartaa inay qodobbo kala geddisan iyana fasalka dhexdiisa ka akhriyaan. Waxaad awood u leedahay oo kuu furan inaad dhawr qodob oo xiiso leh wargeyska ama buug kale oo wax laga akhristo uga soo saartid, ood markaa ardayda u qaybisid, si ay guryahooda ugu soo akhristaan, maalinta labaadna iyagoo u soo tabaabushaystay fasalka hortiisa uga akhriyaan.
Ka digtoonow inaad had iyo goor isla arday uun la xiriirtid, ee waxbaristaada ha noqoto mid wareegta ah oo aad arday walba kartida uu leeyahay qof ahaan u ogaatid.
Haddii ay ardaydaadu tahay qaar horey u maray oo awood ay waxyaabo yaryar ku qoraan leh, ku dhiiri geli inay buugga Xasuus-qorka haystaan.
Taasu waxay ka kaalmaynaysaa inay awoodda yar ee ay leeyihiin wixii xiisa leh ee ay arkaan ama maqlaan ugu qortaan. Waxbarista noocaas ahi xamaasad aan la koobi karin bay ardayda ku beeri waxayna jeclaysiin inay awooddooda cusub ee ay qoraalka u yeesheen ku isticmaalaan.
Had iyo goor taariikhda iyo maalinta wax qorista ha ku billaabaan. Lafta ama suldiggana (text) waxaa fiican inay marka hore buuggooda joogtada ah ku soo diyaarsadaan, sababtuna waxay tahay iyadoo aysan ardaydu u bislayn habka ay fikraddooda isugu hagaajin lahaayeen.
Dhawr fikradood oo barista, waxbarista iyo asluubta baraha saameeya:-
– Casharkaaga ka dhig waqti xiisa leh oo lagu istareexo. Ardayda fursad ay fikraddooda ku dhiibtaan sii, una oggolow oo ku dhiiri geli inay qayb libaax isdabajoogga waxbarashada ee fasalka ka qaataan. Taas waxaa looga jeedaa inaadan casharka 1aad billowgiisaba ardayda ereyo culculus kaga argagixin, looxana aadan xarfo iyo summado kale oo aysan markaa ka hor arkin uga buuxin.
Marka hore ardayda la sheekayso, adigoo isu sheegaya una oggolaanaya inay iyana markooda is dhex galaan ooy is bartaan. U muuji niyadda wanaagsan ee aad u leedahay inaad dhibaatooyinka noloshooda
la xiriira ee maalin walba haysta ka taageertid. Wax uga taataabo ujeeddada qoraalka iyo akhriska laga leeyahay, isla markiina si cad ugu sheeg faa’iidada ay waxbarashadaasi isbeddelka noloshooda u yeelan karto, iyo horumarka degdegga ah ee ay u yeelan karto.
Had iyo goorna ardaydaada waayeelka ah si ay Jaallenimo iyo sinnaan wax wada qabsi leh u dhex gal ulana dhaqan.
Marka aad ogaatid inay ardaydu tallaabada aad joogtid garteen, ha ku celcelin casharkii hore ee u gudub casharka ku xiga; haddii kale waxaa dhici karta inay waxbarashada ka qalbi jabaan, sidaasina ay waxbarashadoodii ay markii hore niyadda u lahaayeen kaga lunto.
Haddaba si aysan arrintaa halista ahi u dhicin, waxaa habboon inaad hawsha aad fasalka ka qabanaysid marba waji cusub u samaysid.
Kaddib markaad intii 20 daqiiqadood ah casharka u macnaysid, awood ay casharka ku akhristaan ama dhexdooda uga wada falanqoodaan sii. Marka ay wada doodayaanna, u oggolow inay qortaan qodobbada u waaweyn ee ay isku af garteen. Iska ilaali oo ha caadaysan inaad isagadhex baxdid, ee adigu maalmaha hore guddoomiye ka noqo, adigoo Weydiimo gaagaaban oo warcelintooda u fududaynaya had iyo goor waddada ugu xaadhaya. Iskana ilaali inaad noqoto kaligii hadle, ee ardaydaadana sii fursad ay fikraddooda ku muujiyaan.
Ku dadaal inaad had iyo goor waaya aragga ardaydaada waaweyn ka faa’idaysatid, sida ay iyaguba aqoontaada iyo waaya aragnimadaada uga faa’idaystaan.
Habka waxbaristaadu ha noqoto mid waxay ardaydu yaqaaniin ka billaabata, kaddibna aad waxaysan aqoonin ugu gudbin kartid. Arrintaasu waxay gacan ballaaran ka geysan kartaa qalbi furnaanta iyo niyadda xoogga leh ee ay ardaydaadu waxbarashada u yeelanayso,
Ku dadaal oo caadayso inaad had iyo goor fasalka ardayda uga soo hormartid, marnabana yeysan dhicin inaad adigoo ogsoon inay ardaydu ku sugayso fasalka ka maqnaatid. Maqnaashada aad maalin casharka ka maqnaataayi, niyad xumi iyo iyagoo waxabarashada ka maangooba bay fasalka ka dhex dhalin kartaa.
HABKA WAXBARISTA IYO ABAABULKA FASALKA
Waxbarista fasalka ee caadiga ahi waa hab joogta ah oo weligii soo taxnaa, maxaa yeelay, waa hab aad u fudud oo dhib yaraan loogu dhaqmi karo. Hase yeeshee, dhibaatooyin dhawr ah oo la xiriira buu leeyahay:-
– Kartida qofku uu wax ku barto, isagoo wixii afka uun looga sheega dhagaysta ee aan kaalin buuxda wax-is-barista ka qaadan aad bay u yar tahay. (Araggu dawr weyn buu waxbarashada ka ciyaaraa).
– Ardayda wax baranaysaayi durbadiiba way daalaan, kaddibna foojignaanta ay waxbarashada u leeyihiin baa ka dhunta oo maskaxdooda baa meela kale tiigsata maadaama aysan si firfircoon wax-is-barista uga qayb qaadanayn.
– Waxaa suuragal ah oo dhici karta inay dhinaca ardayda is afgaranshawaa ka timaado. Sidaas awgeed waxaannu ku talinaynaa in mar alliyaale markay suuragal tahay hababka kale ee waxbarista dadka waaweyn habkan isaga ah kaga habboon waxbarista loogu dhaqmo, gaar ahaan kuwa ugu faa’iidada roon:-
– Kooxaha wadajirka u shaqeeya
– Ardayda oo dhexdooda wax isbara (is-taageeira)
– Hawl gooni ahaan loo qabto, iwm.
Kooxaha wadajirka u shaqeeya:-
Is dhexgalka noocaas oo kale ahi wuxuu qofka siiyaa awood uu isku kalsoonaantiisa iyo kartidiisaba ku muujiyo, waa hab ku habboon oo u qalma wadammada Soomaaliya oo kale ah ee ay ku nool yihiin Bulshad hantiwadaag iyo Demoqraadi ah.
Hawsha koox-kooxdu waxay taabbagal yeelataa mar alliyaale marka uu baruhu doonayo inuu ujeeddooyinkan gaaro:-
– Inuu tacliin cusub ardaydiisa u gudbiyo iyo marka uu doonayo inuu tababar ku siiyo xirfado cusub oo waxbarashadooda saameeya.
– Marka uu doonayo in dhibaato ama mas’alo uu ardayda soo dhex dhigay laga wada murmo, kaddibna si fiican looga baaraan dago ilaa inta uu iska odhanayo xal baa wadajir looga gaadhay.
– Marka uu doonayo inuu hawo demoqraadi ah fasalka ka dhex abuuro isagoo mar walba tixgelinaya mas’uuliyadda uu kooxda iyo qofka kaligii ahba ku leeyahay.
– Marka uu doonayo inuu hagaajiyo wax wada qabsiga iyo isku duubnaan wax loo wada dhaliyo, iyadoo maskaxda iyo ficilkaba looga wada dhan yahay.
– Marka uu doonayo inuu u tababaro, hawshoodana u fududeeyo oo ay baraha kaga madax bannaanaadaan.
Kicinta iyo horumarinta awoodda ardayda;-
Waxaa la ogyahay inay guusha waxbarashada laga gaaro ay tirada ardayda ku xidhan tahay. Taas waxa looga jeedaa inta ay tiradadoodu badan tahay guusha ay waxbarashada ka keenayaanna way yar tahay. Sidaas awgeed, waxaa la door biday inaysan marnaba ardayda waxbaranaysa ama ay hawli ka dhexayso lix ilaa siddeed ka badan.
Hase yeeshee, guusha u weyn ee waxbarashada laga gaaraayi waxay had iyo goor ku xidhan tahay abaabulka iyo isku soo dubbaridka uu baruhu casharkiisa ku soo sameeyo.
– Haddii ay suuragal kuu tahay, casharradaada iyagoo daabacan ardayda u qaybi, haddii kalena, looxa-boodda ugu qor. Casharka la is barayo waa inuu ahaado mid si quman looga soo shaqeeyay oo micna ku fadhiya (marka aad looxa ku qoraysid iyo marka ay ardaydu maskaxdooda uga fikirayaanba.)
– Alaabta ku habboon (qalimmada, buugagga ay wax ku qortaan, iyo waxyaabaha kala geddisan ee waxbarashadooda u fududaynayaba) aad bay waxtar ugu leeyihiin. Sidaas awgeed waxaa baraha laga doonayaa inuu hubiyo in qalabkoodu u wada dhan yahay.
– Haddii aysan ardaydu hawsha kooxda waaya-aragnimo u lahayn, fasalka oo dhan hawl kaliya ka dhexaysii.